ရွာသူ/ရွာသားများ ကိုယ်စိတ်နှလုံးကြည်နှုးနိုင်ကြပါစေ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ရွာသူ/ရွာသားများ ကိုယ်စိတ်နှလုံးကြည်နှုးနိုင်ကြပါစေ…
Posted by ရွှေထီး on Jun 16, 2012 in Photography | 34 comments
စစ်ကိုင်း ဥမင် သုံးဆယ်..
အမှတ်တရ ပုံများဖြင့် ရွာသူ/ရွာသားများ ကိုယ်စိတ်နှလုံးကြည်နှုးနိုင်ကြပါစေ…နောင်လည်းတင်ဆက်ပါဦးမည်…
View all posts by ရွှေထီး →
၁၄၄ နဲ့ ညှပ်ပူး ညှပ်ပိတ်ဖြစ်နေရတဲ့ ကျုပ်အဖို့ ကြည်နူးစရာပါ…
စေတနာထားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါရစေ…..။
၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ…..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကို Gipsy ရေ..
တိုရွှေထီးရဲ့ ရှုမငြီးတဲ့ လက်ရာအစုံလုံကို လက်ခုပ်တီးအားပေးသွားပါတယ်ဗျား..
အောက်ဆုံးက ပွဲကျနေတဲ့ အဖွဲ့ ကိုကြည့်ရတာ ကိုယ်ပါရောပြီး ရီချင်သွားသဗျာ.
ပုတ်သင်ညိုက အူးလေး တစ်ခါတင်ဖူးပြီးသွားသလိုဘဲနော်..
ဟဲ့ဟဲ့ အရင် ပုတ်သင်ညှိက ငါတို့ ထန်းရည်နဲ့မြည်းဖို့
ဒါနဲ့ ရေခွက်တစ်ခွက်ယူသွားတယ် ထန်းရည်သောက်ဖို့ခွက်မရှိလို့
အရင်ကောင်က နဲနဲသေးတယ် …အခုကောင်ကပိုကြီးတယ်နော်..
ဟုတ်ပ… သွားတွေတောင် ကျွတ်ကျကုန်မှာစိုးရသေး..အဟေးဟေး…
အားလုံးကောင်းပါတယ် နောက်ဆုံး ပုဂံ ပုံကို အကြိုက်ဆုံးဘဲ
ရွက်စိမ်း ဆိုတာလေးတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး
ကိုရွှေထီးရေ ….ဓါတ်ပုံပညာကတော့ အံ့မခန်းနိုင်အောင် ဆရာကြီးပါပဲ … ။
တကယ့်ကို ဓါတ်ပုံပညာရှင်တစ်ဦးပါပဲလား …. ကြည့်ရတာလည်း ပုံတိုင်းပုံတိုင်း မရိုးနိုင်တဲ့ ရိုက်ချက်တွေနဲ့ …. မျက်စိထဲ စွဲကျန်စေမယ့် ပုံရိပ်များပါပဲ … ။ အောင်မြင်မှုများစွာရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော် …
ရုပ်သေးရုပ်လေးကို ရိုက်ထားတာ ကြိုက်ပါတယ်။
ဂွတ်မောနင်း… ဂွတ်နိုက်စ် ;)
ကျေးဇူးတင်လှပါတယ်ဗျာ။ ကျူပ်က ပုဂံမရောက်ဘူးတော့ ပုံတွေထဲကနေဘဲ အလည်သွားနေရတာဗျ။ ကိုရွှေထီးပုံတွေကနေတစ်ဆင့် အလည်သွားတော့လည်း ကြည်နူးရပြန်တာပါဘဲ။ ကျွန်တော်တော့ ဆင်တစ်ကောင်ဖမ်းသွားသဗျို့။ ဟိုး…ဟိုး..။
ဆင်ပဲဖမ်းသွားတာလား ဘီလူးကိုရော အလည်မခေါ်သွားဘူးလား…
ဘီလူးကတော့ ခေါ်စရာမလိုဘူးဟ။ တို့များအိမ်မှာမှန်ရှိတယ်လေ။ ဆင်ကတော့ မဖမ်းလို့မရဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ တန်ဖိုးအကြီးဆုံ့းလေ။ ဟေ….ဟေ့
ပုံတွေကို ကိုယ့်နာမည်ဟဲဗီးကြီးတွေတတ်ထားတာ သဂျီးမင်းအလွန်နစ်နာဘာဒယ်
( ကျုပ်လောက်နီးနီး တော်တာကိုတော့ ချီးကျူးဘာဒယ် )
ဟဲ..ဟဲ….ကျွန်တော်လည်း မော်ဒယ်မဌားရတော့ဘူးပေါ့… ၀ါသနာပါရင်ပြောတာပါ..
အမှတ်တရ မော်တော်ပေါ်မှ…ဆိုတဲ့ ပုံလေးကို ကြည့်ပြီး ၀င်းဦးရဲ့ ရေချိုးဆိပ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလောတောင် ကြားယောင်လာမိတယ်။
အမှတ်တရ မော်တော်ပေါ်မှ…ဆိုတဲ့ ပုံလေးကို ကြည့်ပြီး ၀င်းဦးရဲ့ ရေချိုးဆိပ်ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးတောင် ကြားယောင်လာမိတယ်။
မမရေထဲ ဆင်းကူးချင်စိတ်တွေ ပေါက်လာပြီ…ဟော ပြောရင်းဆိုရင်း ရေထဲကိုဒိုင်ပင်ခုန်ဆင်းသွားပါတယ်ခင်ဗျား….
ဟုတ်ပါတယ် ကိုပေါက်ရေ….ကျွန်တော်ရွာမင်္ဂလာဆောင်ဓါတ်ပုံသွားရိုက်ရင်း အမှတ်တရ ရိုက်ခဲ့တာပါ..
သူတို့ကို အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပါတဲ့…ကောင်းပြီ အကုန်လုံး အဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီး၊ ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး
ရယ်ပါလို့ပြောတော့၊ သူတို့က ဘယ်လိုရယ်ရမှာလဲတဲ့၊ မရယ်တတ်ဘူးတဲ့၊ ရှက်တဲ့သူတွေလည်းပါမှာပေါ့လေ…..၊အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဒီလိုရယ်ဆိုပြီး ကင်မရာကို လည်ပင်းလွယ်… လက်နှစ်ဖက် ခါးထောက်ပြီး….အသားကုန် ရယ်ပြတော့တာပဲ (ပေါတယ်နော်)…
အဲ့ဒီတော့မှ သူတို့အားလုံးက ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး အားရပါးရရယ်တော့တာပဲဗျို့…အခုကြတော့ ဘာလို့ရယ်လဲလို့မေးတော့…ဓါတ်ပုံဆရာရယ်တဲ့ပုံက ရယ်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ဗျို့..ဒီပုံလေးက ကျွန်တော်ပြည်ကြည့်မိတိုင်း ရယ်ချင်မိတယ်….၊ တစ်ခါတစ်လေ ဓါတ်ပုံဆရာတွေလည်း ပေါရမယ့် အချိန်ရောက်တော့လည်း ပေါ၊ ဖောရမယ့် နေရာကျလည်းဖော… ၊၀မ်းရေးတွက်မှလား…
ကျွန်တော့် ပုံလေးကိုကြည့်ပြီး ရွာသားတွေ ရယ်ချင်စိတ်၊ ကြည်နှုးစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကို ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်…အခုတလောရွာထဲမှာ..စိတ်ညစ်စရာ၊စိတ်ရှုပ်စရာ၊၀မ်းနည်းစရာတွေကြား မှာကျွန်တော့်ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး စိတ်ကိုကြည်နှုးပျော်ရွှင်စေချင်မိတာ ကျွန်တော့်စေတနာအမှန်ပါ….
အဲဒါကြောင့် ကွန်နက်ရှင်မကောင်းတဲ့ ကြားက မရရအောင်တင်လိုက်တာပါ….
ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ……ခင်တဲ့ ရွှေထီး
အရင်အားပေးဖူးတဲ့ပုံလေးတွေပါပြန်ပြီး တစ်စုတစ်စည်းထဲကြည့်ရတာ သဘောကျတယ်. အောက်ဆုံးပုံလေးကတော့တကယ့်ကိုအသက်ဝင်ပါတယ်…ဒီရက်ပိုင်းမှာ စိတ်အတော်လေနေတဲ့ကျမကို ပြုံးမိစေပါတယ်..
အောက်ဆုံးက.. ရယ်နေကြတဲ့ပုံများ.. တယောက်ဆီက.. အဓိပ္ပါယ်တခုစီပေးနေတာလို့.. ထင်မိတာ..
သူကြီးကြိုက်ရင်ယူပါ…ဖားထားရမယ်လေ…အလိုက်သိရမှာပေါ့…နာမည်တပ်ထားတာပြန်ဖျက်ပေးမယ်လေ….ပြီးရင် သူကြီးရဲ့ သတင်းစာထဲထည့်ပေးပေါ့…
သူကြီး ကြိုက်ရင် အကုန်သာဝယ်
သူကြီးဝယ်ရင် ရတဲ့ငွေအလှူထဲ ထည့်မယ်နော်။
ကိုပေါက်ရေ တကယ်ရောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်…ရောင်းလို့ရသမျှ အကုန်လှုတယ်….အလှု့ရှင်နာမည်လေးတော့တပ်ပေးပါနော်….
ဒေါသမောဟ မာန်မာန တွေထောင်လွှား ထို အရိပ်များ ။
မြစ်ဆိပ်က ရေချိုးနေတဲ့ပုံရယ် လိပ်ပြာလေးတွေရော လှပါတယ်
တစ်ပုံချင်းစီကို အချိန်ပေးပြီး ခံစားသွားပါတယ်။
လက်ရာကလဲ ကောင်းသမို့ နောင်လဲ အချိန်ရရင် ထပ်တင်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။